I-Apple ivimba isici se-iCloud Private Relay se-iOS 15 eRussia | Izindaba ze-IPhone
U-Angel Gonzalez | 17/09/2021 20:00 | iOS 15, Izaziso
IOS 15 kanye ne-iPadOS 15 ziletha nenye yezinto ezinhle kakhulu ku-Apple: Ukudluliswa kwangasese kwe-iCloud noma i-iCloud Private Relay. Kuyithuluzi ukuthi ivumela umsebenzisi ukuthi afihle i-IP yakhe ngaso sonke isikhathi ukuvimbela izinsizakalo ekutholeni iphrofayili yendawo. I-Apple imemezele ku-beta 7 ye-iOS ne-iPadOS 15 ukuthi izoshiya umsebenzi ngesimo se-beta yomphakathi futhi izokhishwa ngokusemthethweni kepha ikhutshazwe ngokuzenzakalela. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule i-Apple imemezele amanye amazwe ukuthi ngeke awubone lo msebenzi ngenxa yezinkinga zomthetho wawo. Namuhla siyakwazi lokho Ukufinyelela okubanzi kweRussia kulesi sici kuvinjiwe futhi kungenzeka kungezwe kuhlu lwamazwe lapho isici singatholakali khona.
ICloud Private Relay ngeke ikubone ukukhanya eRussia
NgoJuni, uTim Cook uqinisekise ukuthi i-ICloud Private Relay wawungeke ufinyelele eBelarus, eColombia, eGibhithe, eKazakhstan, eSaudi Arabia, eNingizimu Afrika, eTurkmenistan, e-Uganda nasePhilippines. Kule ngxoxo, uqinisekise ukuthi akukho siphazamiso ngaphandle kwezizathu zokulawula ezweni ngalinye. Ngakho-ke, izinhlobo zokugcina ze-iOS 15 ne-iPadOS 15 bezingeke zingenise lo msebenzi futhi uma kwenzeka zingena ezweni bekungeke zitholakalele ukusetshenziswa.
ICloud Private Relay ayisasekelwa eRussia pic.twitter.com/df4z1q0gLQ
Emahoreni ambalwa adlule kwaqala ukuvela ama-tweets futhi izindaba abasebenzisi abane-iOS ne-iPadOS 15 betas abakwazanga ukubhekabheka ne-ICloud Private Relay eRussia. Eqinisweni, kuzovela umyalezo othi: 'ICloud Private Relay ayitholakali kulesi sifunda'. Ngakho-ke, kungenzeka ukuthi i-Apple isivimbe lesi sici eRussia. Ngakho-ke, izokwengezwa emazweni lapho leli thuluzi lingatholakali lapho kwethulwa ngokusemthethweni izinhlelo zokusebenza. Futhi kunganwetshwa kwi-MacOS Monterey, mhlawumbe.
I-ICloud Private Relay isebenzisa amaseva amabili ahlukene uku fihla i-IP yomsebenzisi nendawo. Kwiseva yokuqala i-IP yoqobo iyasuswa bese kweyesibili isinali lishayelwa kwiseva okuyiwa kuyo. I-IP ethunyelwe ikheli elingelona iqiniso lapho i-geo-ibeka khona i-IP yangempela ukuze ithole okuqukethwe okwenzelwe wena. Yize ikheli le-IP lomsebenzisi lifihliwe futhi livimbela amaseva ekudaleni amaphrofayli okuphequlula.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » iOS 15 » I-Apple ivimba isici se-ICloud Private Relay esiseRussia